Far Away Love ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်ကစပါသလဲဆိုအလွဲလွဲအချော်ချော်များဆီမှ အမှတ်တရများဆီသို့လို့ပဲပြောရမလား
အခုဒီဇာတ်ကားလေးမှာလည်း မချစ်တတ်သူ၂ဦးက လွဲပြီးရင်း လွဲကြရင်း ချစ်မိသွားကြတဲ့အခါ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့Ghost Agentကြီးက ဘယ်လိုတွေ နုထားသလဲဆိုတာ ကြည့်မှသိမယ်နော်!!
ကြင်နာတတ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့ မုံ့ချူးရှ(Li Fei Er)ဟာ အသက်၂၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။
သူမဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့အစ်မကြီးရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားဖြစ်သူကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရင်း ဘဝကိုခက်ခဲစွာရုန်းကန်နေရပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာ စိတ်ကူးတောင်မယဉ်ဖူးပဲ အလုပ်လုပ်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရင်း တူဖြစ်သူကို သားအရင်းပမာ ချစ်နေရရုံနဲ့တင်Singleဘဝကို ပျော်ရွှင်နေသူတစ်ဦးပါ။
ရှန်အ(Park Hae Jim)-(cheese in the trap)ဟာ ပထမဆုံးအချစ်ကြောင့် အသဲကွဲခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အချစ်ကိုအယုံအကြည်မရှိတော့ပဲ CEOတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ အချစ်မပါလည်း သင့်တော်တဲ့မိန်းမတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ တရုတ်ကိုပြန်လာပြီး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်း သင့်တော်တဲ့မိန်းမနဲ့လက်ထပ်​ဖို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့မိန်းမတွေနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါ….
အချစ်ကို အယုံကြည်မရှိတဲ့သူတို့၂ဦး ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါ
မုံ့ချူးရှက ရှန်အရဲ့ ဘဝကိုဘယ်လိုတွေဝင်နှောက်မလဲ ဘယ်လိုRoကြမလဲဆိုတာသိချင်ရင်တော့
Translators : Maw , Cheng Ai Zheng , Myint Mo Zaw & Eaindray
31 32 33 34 35 Final36
Soliddrive Download Link
Starring: Angel Liu, Angie Chiu, Leo Wu, Li Fei Er, Park Hae-jin, Zhang Golden,